I-biography ye-actor yayingelula kwaye kulula njengoko sifuna. ULeonid Kuravlyov wayenomngeni wakhe. Ngenxa yoko, i-biography yaseKuvvlev, inezo zibini ezikhanyayo kunye namnyama. I-biography yomdlali we-Leonid Kuravlyov inezinto ezininzi ezinomdla. Siza kuthetha ngabo kwinqaku malunga ne-biography yomdlali we-Leonid Kuravlyov.
Ngoko, ubomi be-actor baqala njani? I-biography yale ndoda ivela eMoscow. Kubonakala ngathi ukuhlala enkulu, uLeonid kufuneka abe nayo yonke into kakuhle. Kodwa, isithuba seKuvvyoyov samlungiselela iimvavanyo ezininzi. Xa ubomi bomdlali weqhawe kwakuqala nje, washiya ngaphandle kompapa. ULeonid wakhuliswa ngumama omnye. Kwaye ngo-1941, unina waseKuvvyov wasolwa ngamacala awazange awenze, waza wathumela eNyakatho. Kukho apho i-biography yomdlali wexesha elizayo yaqhubeka. Ngoko uLeonid wasebenzisa ubuntwaneni bakhe besilamba, ebandayo, kwada kwada kwaphela abavunyelwe ukubuyela eMoscow.
Xa uLenya aye esikolweni, wayengenakuziqhayisa ngamanqaku aphezulu nolwazi olufanelekileyo. Umntu wayengathandanga i-sciences echanekileyo, ngoko ke, into ebunzima kuye yayinayo ye-physics, chemistry kunye nemathematika. Kodwa, ngubani oza kuba ebomini, ukuba awuyithandi i-sciences echanekileyo? ULeonid wayedla ngokucinga ngako. Kwaye ke udadewethu wayedlala, esithi uya kuVGIK, kuba akukho nto imfuneko, okanye ukufundisa, okanye ukunikela ngezinto uLenid ayithandiyo. Njengoko bethetha "kuwo onke amahlaya, ihlaya kuphela, kwaye yonke into iyinyaniso." Ngoko ke, uLeonid wacingisisa ngokuba ngumdlali. Ngoko ke, ekugqibeleni ugqiba isikolo, waya kuVGIK, athetha noodadewabo. Kodwa, ngokusobala, ngoko uLenya akazange akhiphe ngokupheleleyo iitalente zakhe, ngoko ke, ukuzama kwakhe kokuqala akuphumelelanga. Oku kwenzeka ngo-1953. Kodwa, iKuravlyov yayiyindoda enenkani, ngaphezu koko, akukho ndawo ifuna khona ukufunda. Ngenxa yoko, lo mfana waya eMoscow u "Artist", kwaye ngo-1955 wabuyela kwakhona kwiVGIK, ngenjongo yokungena khona, nangaliphi na indleko. Kwaye, wakwenza. Umfana wadlula iimviwo zokungena waza wafika kwi-Bibikov.
Ukuba sithetha ngomsebenzi weqonga kwi-movie, ngoko waqala ukurhoxisa, nangona wayengumfundi. Umfana wadutshulwa kwifilimu yaseSwitwezer "i-Midshipman Panin". Wadlala indima yomkhumbi. Ngelo xesha, uKuravlev wadlala kwiprojekthi yokuphumelela iSaskshin Basil. Kwakuyifilimu "Ukususela Kwi-Swan Face". Emva koko uLeonid Kuravlev wadlala ezininzi iifilimu, kodwa nguShukshin owaba ngumlawuli ovule lo mdlali kumntu. Kakade, oku akuzange kwenzeke ngoko nangoko, kuba uShukshin ngokwakhe wayesesigqiba. Kuravlyov yabonakala phambi kwabaphulaphuli kwizikrini ngo-1964. Kwaye kwenzeka ntoni kuye ngaphambi kweli xesha? Emva kokugqitywa kwiVGIK, uLeonid waya eyokudlala i-Theatre-studio yomdlali. I-Kuravlev idlala indima kwindawo yokuzonwabisa nakwizinga. Nantsi nje ama-movie ayengabonakaliyo njengoko ayekho kwiifilimu zikaShukshin. Nangona kunjalo, uKuravlev wadlala neVerravno, enza imisebenzi enomdla kunye nokufumana amava avela kumatumi ahloniphekileyo nawadumile. Ngokomzekelo, ngo-1961, uKuravlev wadlala kwi-melodrama "Xa imithi yayinkulu." Indima ephambili idlalwe yinto engekho ngaphandle koYis Nikulin engummangaliso kwaye engalibalekiyo. Le ndoda yayinento ethile yokufunda. Ukongeza, kunye neKuvvlev kule fayili uShukshin ngokwakhe wadutshulwa. Baba ngabahlobo abasondeleyo, kwaye xa ngo-1964, uVasily Shukshin wakhetha abadlali kwiifilimu zakhe "Kukho umntu onjalo" kunye "Nonyana wakho nomntakwabo", uLeonid wamenywa ngokukhawuleza ekuqhubeni. "Kukho umntu onjalo" - ngulo mnye wemifanekiso enelanga nevuyayo kaShukshin, okubalulekile ukuba ibone, kwakungekho nto kwifilimu yakhe. Kule filimu, uKuravlev wadlala uPasha Kolokolnikov. Umlingiswa wakhe unesidla, ububele kunye nokuhleka kweentloni. Ngendlela, ku funeka kuqatshelwe ukuba uKuravlev cishe akazange ahlale engenalo nxaxheba. Inyaniso kukuba yena noShukshin bahlaziya ixesha elide kakhulu, kodwa, ekuvavanyeni, uLeonid wachaphazeleka kwaye uhlamvu lwakhe lwaba lube yinto enjani. Ibhunga lobugcisa be-studio ye-Gorky yefilimu yifunde oku njengobungqina obucacileyo bokuthi uLeonid akakwazi ukubeka inxaxheba kwinqanaba. Kodwa, uShukshin wayesazi kakuhle, ngoko ke, wada wada wamlwela umfana esakwazi ukudlala. Ekugqibeleni, uKuravlev washiya kwifilimu, kwaye akukho namnye owazisola ngayo. ULeonid wabonisa zonke iitalente zakhe kwaye wenza, ngokucela kukaShukshin, ukuziphatha kwakhe. Abaninzi bacinga ukuba kwakungekho uPasha oye waqhayisa, kodwa uKuvvlev ngokwakhe. Yile ndlela i talente kaLeonid yenziwe ngayo.
Ewe, kwifilimu "Unyana wakho nomzalwana" - Kuravlev wadlala indima kaStein Voevodin. Umlingani wakhe, eqinisweni, wawufana noPasha Kolokolnikov, kodwa, ngokugqithiseleyo. Emva koko, uLeonid akade edlala kwiifilimu zikaShukshin. Ngaphezu koko, abazange baxabane baze baqondane kakuhle. Ngokulula, uLeonid akazange afune ukunyaniseka ngokukhawuleza, kwaye uVasily wayekuqonda oku.
I talente yangempela.
Inxaxheba elandelayo, ekhunjulwa ngabaphulaphuli, nguSra Bala Balavanov kwi-Golden Calf. Kulapho, uKuvvlev wazibonakalisa njengomntu onetalente kunye nomkhwenkwezi, edala umfanekiso omhle, phantse umgangatho olinganisa abanye abadlali abadlala kulo mfilimu. Nangona ukuba kufuphi kakhulu neKuvvlev badlala abadlali abalungileyo, akukho mntu wakwazi ukumbonisa. Emva koko, bonke abaphulaphuli babeqinisekile ngokuqinisekileyo ukuba uLeonid Kuravlev ungumdlali onetalente onokumangalisayo kunye nobuntu obuqaqambileyo. Kodwa, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iKuvvlev, ngokulinganayo inokwenza zombini iindima eziphawulekayo kunye neengqungquthela. Unako ukwenza imifanekiso eyahlukileyo. Kungenxa yale nto wayethandwa rhoqo ngababukeli, abadlali kunye nabalingane.
Enye indima apho abaphulaphuli bayithandwa ngayo isela-umyeni uGeorges Miloslavsky kwi-comedy edumileyo kaLeonid Gaidai "U-Ivan Vasilyevich utshintsha umsebenzi wakhe". Le nxaxheba kwakukudlala umdlali ongenalwazi oluncinane - Andrei Mironov. Kwaye kwakuyiKiravlyov eyayifumana. Wenza ngokukhawuleza. Wajonga kakhulu kunye neenkwenkwezi ezinkulu ze-cinema yaseSoviet. UKuvvlev wadlala ubomi bakhe ngaphezu kweendima ezingamakhulu amabini, kwaye uyaqhubeka ehoxisa. Ngokwenene uyilente engenakubonwa.
Ukuthanda umlingisi uRina Green
Iingoma zomculi waseMukraine uJamala
Ubomi bomntu kaVera Alentova
Biography kaMichelle Trachtenberg
Iincwadi ezilungileyo kakhulu nguStephen King
UAlexander Kireev: UDedbysh wayenomsebenzi we-sharashkin, kwaye akayiyo indawo yokuvelisa
Ukuhlanjululwa kweKrismesi: iindlela kunye nokutolika
5 iintlobo zengqondo zengomama: fumana ukuba umntwana wakho uya kukhula njani
I-Cuba lizwe elinelanga-utopia
Impazamo yamabhinqa ekunxibelelana namadoda
Uyazi njani ngokuthinta nokuziphatha, uthanda umntu
Ibheke e bhaka
Iprokhor Chaliapin no-Anna Kalashnikova baya kutshata ngomhla wokuzalwa ka-Alla Pugacheva
Ukunyamekela kwesikhumba ngobuso nomzimba
Sakhetha iimpahla phantsi kweembadada kwi-tracta yodwa